Pabrikan'ny vy vy fikosoham-bary ary mpamatsy | Ouzhan
Ny vy karbonika dia firaka vy-karbonina miaraka amin'ny atin'ny karbaona 0,0218% ka hatramin'ny 2,11%. Antsoina koa hoe vy vy. Amin'ny ankapobeny, izy io dia misy silikônika, manganese, solifara ary phosforus kely ihany koa.
Amin'ny ankapobeny, arakaraky ny habetsahan'ny karbaona vy amin'ny karbaona no mampitombo ny hamafiny ary avo kokoa ny tanjaka, fa ny ambany kosa no mampidina ny plastika. Ny fikosoham-bary vy amin'ny karbaona dia manana fampiharana marobe ary mety amin'ny ankamaroan'ny faritra mekanika. Ouzhan dia hampanjifa matihanina ny faritra ampiasain'ny milina mifanaraka amin'ny sary sy ny takiana aminao. Ny foiben-toeran'ny milina fitotoam-bary dia tena mety amin'ny fanodinana ireo karazana workpiece toy ny faritra miolikolika sy fitaovana fampitaovana miolakolaka. Ny faritra miolikolika dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny indostria, toy ny turbine glades, propeller an'ny sambo, vokatra indostrialy misy tavoahangy vita amin'ny kodiara, sns. Amin'ny ankapobeny, ny faritra miolaka dia zahana amin'ny fikosoham-bary.
Tombontsoa amin'ny vy vy vy vy Ouzhan
- Vidiny ambany, mora maimbo
- Teknolojia fanodinana tsara
- Hatsarao ny zava-bita (C%, fitsaboana hafanana)
OEM namboarina vy fikosoham-bary vy-China Shanghai CNC vy vy fikosoham-bary faritra
Ouzhan dia mpamokatra manambatra indostria sy varotra, manome serivisy fanodinana milina tokana sy milina fanodinana. Araka ny fitakian'ny mpanjifa dia afaka manodina vy vy miaraka amina faritra matevina miorina tsara sy azo itokisana izy io. Ireo faritra masinina ireo dia amboarina amin'ny alàlan'ny akora faran'izay tsara kalitao, izay azo avy amin'ireo mpamatsy ampahany marim-pototra fanta-daza eny an-tsena. Ny ekipa teknika matanjaka sy matihanina ary ny rafitra fitantanana mahomby sy miasa dia afaka miantoka ny famokarana tonga lafatra ny milina fanodinana vy. Ho fanampin'izay, ny vokatra vy vita amin'ny karbaona vita amin'ny metaly dia manome fatratra ny fenitra kalitao ary azo ampiasaina amin'ny fampiharana indostrialy isan-karazany. Ary afaka manome serivisy vidin'ny fifaninanana ho an'ny vokatra fikosoham-bary vy amin'ny karbaona ho an'ireo mpanjifantsika sarobidy.
Ouzhan vy vy fikosoham-bary machining karazana ampahany
(1) Fizarana fiaramanidina mihodina
Ny toetra mampiavaka ny faritra misy ny fiaramanidina dia aseho fa ny faritra misy ny masinina dia mety mifanindry amin'ny fiaramanidina marindrano, mifandraika amin'ny fiaramanidina marindrano, na amin'ny zoro raikitra miaraka amin'ny fiaramanidina marindrano; ny ankamaroan'ny ampahany voahodina ao amin'ny milina fikosoham-bikan'ny CNC dia ampahany amin'ny fiaramanidina, ary ny faritra misy ny fiaramanidina no karazana faritra mora indrindra amin'ny fanodinana familiana CNC amin'ny ankapobeny dia mila rohy roa-axis na rohy telo-axis an'ny milina famolavolana CNC axis telo ho ampiasaina. Mandritra ny dingan'ny famolavolana, ny fifandraisana amin'ny masinina dia mifandray amin'ny fitaovana, ary ny milina famaranana na antsy omby dia azo ampiasaina amin'ny masinina sarotra sy vita.
(2) faritra mihodina
Ny toetra mampiavaka ny faritra miolakolaka dia ny faritra misy masinina dia faritra miolikolika spatial. Mandritra ny fanodinana dia mifandray hatrany ny masinina sy ny fanapahana fikosoham-bary. Ny famaranana ny tany dia tanterahina amin'ny fikosoham-bary.
Tombony amin'ny serivisy fanodinana vy vy Ouzhan
- Ny vokatra vita amin'ny vy vita amin'ny karbaona vita amin'ny metaly rehetra dia iharan'ny fitsirihana kalitao hentitra.
- Araka ny sary na ny santionany amin'ny fanamboarana ny ampahany manoto vy.
Previous: OEM faritra vy machining vy vy ho an'ny faritra masinina
Manaraka: Mpanamboatra sinoa CNC fangarony vy vy vy